Ahoana no hampitomboana ny fifantohanao - Victor Mochere
Amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny fampahalalam-baovao mihoa-pampana sy ny fanelingelenana marobe dia mihasarotra ny fifantohana amin'ny fanatanterahana ireo asa ilaina. Raha toa ianao ka nahita fa sarotra ny miatrika asa sarotra any am-piasana, na nianatra momba ny fanadinana manan-danja, na nandany fotoana tamin'ny tetikasa sarotra, dia mety naniry ny hampitombo ny fahaizanao mifantoka. Ny fifantohana dia manondro ny ezaka ara-tsaina ataonao amin'izay asanao na ianaranao amin'izao fotoana izao. Indraindray dia afangaro amin'ny halavan'ny fifantohana izy io, fa ny halavan'ny fifantohana kosa dia manondro ny halavan'ny fotoana ahafahanao mifantoka amin'ny zavatra iray.
Ireo fomba etsy ambany dia hampiofana ny fahaizanao mifantoka, nefa tsy manala anao amin'ny asa mahazatra anao.
1. Manomàna sy alaivo sary an-tsaina ireo asa maha-zava-dehibe ny iraka isan'andro
2. Mitadiava ora faratampony
3. Zaro toy ny hozatra ny sainao
4. Ampiharo ny fahatsiarovan-tena
5. Manaova fisaintsainana
7. Makà fotoana hiala sasatra
Ataovy ho isan'ny fanao maraina izany. Avy amin'ireo karazana asa rehetra, mifidiana 1-3 amin'ireo zava-dehibe indrindra, izay ilainao hanome ny tsara indrindra. Ilaina ny mampiofana ny fifantohanao amin'ireo asa tena manan-danja sy tena ilaina. Ny faniriana hanao asa maro be miaraka dia mampihena ny fifantohana sy ny kalitaon'ny asa vita. Ary mba hahomby kokoa ity dingana ity, dia asongadino tsy ireo asa telo ireo ihany fa alaivo sary an-tsaina koa. Eritrereto hoe ahoana no hanaovanao izany, inona no ho vokany, inona no fihetseham-po ho tsapanao. Hampiditra ny sainao izany, ary hiasa amin'ny fampiharana azy mandritra ny andro.
Tsy miankina amin'ny ezaka ataonao ihany ny fifantohana amin'ny saina, fa amin'ny fototarazo ihany koa. Ny famokarana ny atidoha no tena tompon'andraikitra amin'ny famantaranandro biolojika. Misy banga ny vatanao rehefa miasa tsara. Misy fotoana hafa izay hahatsapanao ho malemy sy tsy manana antony. Tandremo ny tenanao mandritra ny herinandro maromaro, mametraka ireo asa manan-danja indrindra amin'ny fotoana samihafa amin'ny andro. Ataovy ao an-tsaina fa miova koa ny vokatrao mandritra ny herinandro. Ny andro sasany dia toa mamokatra kokoa noho ny hafa rehetra. Mankalaza andro sy ora toy izany. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hahazo fandaharam-potoana efa vonona ianao ho an'ireo tranga manakiana sy sarotra indrindra mitaky fifantohana ambony.
Azo atao ny miasa tsy an-kiato amin'ny asa iray mandritra ny adiny iray mahery; noho izany dia ilaina ny mampiofana izany fahaiza-manao izany. Ny zava-drehetra dia mitovy amin'ny fanatanjahan-tena. Amin'ny voalohany dia toa tsy ho vita mihitsy ny mihazakazaka marathon, ary aorian'ny fanazaran-tena isan'andro dia mandresy an'io halavirana io izy. Afaka manao toy izany koa amin'ny atidohanao ianao. Voalohany, ataovy fohy ny tsingerin'ny asanao, toy ny, ohatra, amin'ny teknikan'ny Pomodoro malaza: 20 minitra fiasana, 5 minitra fialan-tsasatra. Rehefa mandeha ny fotoana, ampitomboy 1-2 minitra io fetra io. Tsy ho ela ianao dia ho afaka hiasa amim-pahombiazana mandritra ny adiny iray manontolo, hanokana fotoana kely indrindra hialana sasatra. Ataovy ao an-tsaina fa tokony hifantoka amin'ny zavatra iray ianao. Ny fifandimbiasan'ny saina tsy tapaka (ny multitasking malaza), ny mifanohitra amin'izany, dia mampihena ny fifantohanao.
Ny fampiharana ny saina (na ny fahatsiarovan-tena) dia tsy midika afa-tsy ny fifantohana amin'izao fotoana izao. Ary tsy zava-dehibe izay tena ifantohan-tsainao amin'izao fotoana izao: miasa, mandeha an-tongotra, miresaka amin'ny olon-tianao, fitsangatsanganana amin'ny fitateram-bahoaka na ny fofonainao aza. Ny teny fototra dia ny fifantohana. Rehefa manapa-kevitra ny hampihatra ny saina ianao dia tokony hanadino ny zavatra hafa rehetra; momba ny lasa sy ny ho avy, ary miaina amin’izao fotoana izao. Mahatsapa fofona manodidina, henoy tsara ny teny tsirairay avy amin'ny mpiara-miresaka aminao, diniho ny lamin'ny asfalta mikorontana eo amin'ny fijanonan'ny trolleybus. Mifantoha fotsiny amin'izay ataonao amin'izao fotoana izao. Ny toetra mampiavaka an'ity fomba ity dia ny fahafahanao miditra amin'ny fahatsiarovan-tena na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra.
Fomba iray hafa izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fahafahan'ny atidoha mifantoka amin'ny fisaintsainana. Nohamafisin'ny fanadihadiana maro izany, izay naneho fa ny fanazaran-tena tsy tapaka amin'ny fisaintsainana dia mampitombo be ny saina. Tao anatin'ny fanadihadiana iray, mpandray anjara 60 no nahavita fomba fisaintsainana 3 volana teo ambany fitarihan'ireo mpanoro hevitra efa za-draharaha.
Nandritra ny fianarany dia nanandrana tsindraindray ny fahaiza-manaony izy ireo. Hitan'ny mpahay siansa fa saika ny mpandray anjara rehetra dia nianatra nifantoka ela kokoa. Nojerena indray ireo taranja taorian'ny dimy volana. Tsy miova ny fanatsarana, indrindra ho an'ireo mpandray anjara izay nanohy nisaintsaina isan'andro taorian'ny fanandramana.
Ny hetsika ara-batana dia misy fiantraikany mitovy, toy ny fisaintsainana. Ao amin'ny fanandramana hafa, ny mpahay siansa dia nanoro hevitra fa ny mpianatra amin'ny lisea dia mamaha olana mifandraika amin'ny fifantohana amin'ny fanjakana mahazatra, aorian'ny fialan-tsasatra 20 minitra ary aorian'ny dia an-tongotra 20 minitra eo amin'ny treadmill. Ny mpahay siansa dia nandrakitra ny asan'ny neuroelectric ao amin'ny atidoha. Vokatr'izany dia hita fa ny tarika mandeha an-tongotra dia naneho ny fampisehoana tsara indrindra. Samy nanamafy izany ny fitiliana sy ny angon-drakitra Electroencephalography (EEG).
Mba ho tompon-daka amin'ny fibata mavesatra dia mila miofana be ianao, mihinana betsaka ary miala sasatra be. Esory ny singa iray farafahakeliny, ary, amin'ny tsara indrindra, dia tsy hahatratra vokatra ianao, ary ny ratsy indrindra, dia hahazo olana ara-pahasalamana amin'ny harerahana ianao. Raha te ho tompondaka amin'ny fifantohana ianao dia mitovy aminao izany. Tsy afaka mijanona ho mifantoka foana ianao. Arakaraka ny hiasanao no tsy dia miala sasatra, ny atidohanao malemy, ary ny fahaizany mifantoka amin'ny zavatra iray.
Mifanohitra amin'izany, fialan-tsasatra 5 minitra monja aorian'ny ora fiasana iray dia ahafahanao mamerina ny bateria ary mandroso indray miaraka amin'ny vokatra avo lenta. Fa raha marina ny ambiny. Tsy maintsy mivadika tanteraka amin'ny asa ankehitriny mankany amin'ny zavatra hafa ianao. Raha nipetraka teo amin'ny ordinatera nandritra ny adiny iray ianao, dia manaova fanatanjahan-tena mandritra ny 5 minitra manaraka - na dia an-tongotra fotsiny aza.
Antony hampiharana ny famoronana asa soratra
Mpihira 10 manankarena indrindra eto Afrika 2022